Mashandisiro ekushandisa HomeKit Environments uye Automations | IPhone nhau
Mashandisiro aungaita HomeKit Environments uye Automations
HomeKit inotipa maviri anobatsira maturusi ekugona kudzora akati wandei michina panguva imwe chete uye / kana kuita mabasa otomatiki zvinoenderana nezviitiko zvinoitika uye kuti isu tinokwanisa kugadzirisa zvisingatomboite muganho. Mamiriro ezvinhu uye iyo HomeKit Automations zvinhu zviviri zveKeKKit izvo zvinoita mutsauko nemamwe mapuratifomu uye izvo zvakakosha kuziva nekuti nazvo iwe unokoshesa otomatiki epamba zvakanyanya. Isu tinotsanangura mashandiro avo muvhidhiyo iyi.
Iyo Nharaunda dzinokutendera iwe kudzora akati wandei HomeKit zvishandiso panguva imwe chete, kuburikidza nemirairo imwechete kana nemuchinda webhatani bhatani. Unogona kubatidza mwenje yakati wandei nekuraira kuna Siri, asi kwete izvo chete, asi unogona kutsanangura kupenya kwakaita girobhu rimwe nerimwe, kusanganisira kuti ndeupi mutserende, Ruzha rwePamba Rwunonzwika sei, uye nderipi runyorwa rwaunoda kuteerera, nezvimwe. Iwe unoda here kuti mwenje yekutandarira usimbe kana iwe uchiona firimu? Kana yako HomePod kurira uye kuvhura iyo kofi muhari plug paunoti mangwanani akanaka kuna Siri? Unogona kuiwana mumaminetsi mashoma nekuda kwenzvimbo.
Automations chishandiso chemberi cheKeKit chishandiso chiri nyore kwazvo uye intuitive kushandisa, asi nemhando dzakasiyana siyana dzekugadzirisa maitiro. Sarudza chinokonzeresa, chinogona kunge chiri chekuti munhu anosvika kana kubva pamba, kuti inguva yakatarwa kana kuti chigadziro chakatemerwa chakavhurwa, uye izvo zvaunoda kuti zviitike mushure mechiitiko ichocho chinokonzeresa, chinogona kubva pakuita Nharaunda kusvika mwenje wakapusa unouya. Batidza mwenje wemba yekutandarira kana iwe wasvika kumba, uye wobva waidzima kana munhu wekupedzisira pamba abva, kana kuita kuti "Movie" Atmosphere iite zvega paunobatidza terevhizheni ingori mienzaniso mishoma yezvaunokwanisa kuzadzikiswa neMagetsi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 13 » Mashandisiro aungaita HomeKit Environments uye Automations
Maitiro ekudzima yako iPhone, iPad kana Mac usati watengesa
Pfungwa iyi inoratidza iyo iPad Pro ine yakaoma yemakamera matatu